Xildhibaanada Aqalka Sare oo maanta Ansixiyey Sharciga Isgaarsiinta dalka | SAHAN ONLINE
Xildhibaanada Aqalka Sare oo maanta Ansixiyey Sharciga Isgaarsiinta dalka
MUQDISHO – Xildhibaanada aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta oo Isniin ah ansixiyey Xeerka Isgaarsiinta Qaranka kaasoo ay horay u soo ansixiyeen Gollaha shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya 9kii bishan Agoosto.
Xildhibaanada ayaa dood dheer kadib ku ogolaaday 39 kamid ah ,40kii mudane ee fadhiga soo xaadirtay.
Sharcigan ayaa noqonaya kii ugu horeeyey ee uu ansixiyo Aqalka sare tan iyo markii la aasaasay dhammaadkii sanadkii hore.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sharciga loo gudbinayaa si uu u saxiixo ka hor intuusan dhaqan gal noqon.
Wasiirka Boostada,Isgaarsiinta & Teknoolojiyada Cabdi Cashuur Xasan ayaa sheegay in sharcigan uu muhiim u yahay dalka” “Waa sharci ay in mudda ahba sugayeen dhammaan inta daneysa arrimaha isgaarsiinta,” ayuu yiri.
Maanta waa maalin kale oo taariikhi ah, waana tallaabo loo qaaday in sharci iyo kala-dambeyn loo sameeyo isgaarsiinta dalka, sababtoo ah sharcigan waa kii ugu da’da weynaa ee hor yaallay baarlamaannadii dalka soo maray muddo ka badan 10 sano,” ayuu raaciyay.